ဘုရားသခင်၏ အသံတော် – အနန္တတန်ခိုးရှင် ဘုရားသခင် အသင်းတော်
စောင့်လို့နေ ရုပ်ရှင်ကလစ်၊ ဘုရားသခင်၏ အသံတော်ကို ကျွန်တော်တို့ ဘယ်လို ခွဲခြားနိုင်မလဲ ၂
February 22, 2019 kingdomsalvationmyLeaveacomment
“ဝိညာဉ်တော်သည် အသင်းတော်တို့အား အဘယ်သို့ မိန့်တော်မူသည်ကို နားရှိသောသူမည်သည်ကား ကြားပါစေ။”” (ဗျာဒိတ်ကျမ်း ၊၂:၂၉)
အသင်းတော် များသို့ သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်ပြောခဲ့သည့်စကားကို သင်ကြားခဲ့ပါသလား? အနန္တတန်ခိုးရှင်ဘုရားသခင်နဲ့ သခင်ယေရှုတို့ ဖော်ပြခဲ့တဲ့ နှုတ်ကပတ်တော်တွေက တစ်ဆူသော ဝိညာဉ်၊ တစ်ခုတည်းသော အရင်းအမြစ်မှ ဟုတ်ပါသလား? ဒီ ရုပ်ရှင်က ထိုအချက်များကို သင်နားလည်ဖို့ဖော်ပြပါလိမ့်မယ်။ (ခ)